तरुण दल तिलोत्तमाद्वारा आयोजित वडास्तरीय फुटसलमा वडा नं. ४ विजयी – Samabeshi Khabar
Thursday, April 22Nepal News Portal
तरुण दल तिलोत्तमाद्वारा आयोजित वडास्तरीय फुटसलमा वडा नं. ४ विजयी
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:४७ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । नेपाल तरुण दल, तिलोत्तमा नगर समितिले सञ्चालन गरेको वडा स्तरीय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं. ४ ले हात पारेको छ । शनिबार भएको फाइनल खेलमा वडा नं. ४ ले वडा नं. १ लाई पराजित गरेको हो । निकै रोचक भएको खेल ट्राइबेकरबाट विजेताको टुंगो लागेको थियो ।
वडा नं.४ ले ३/२ गोलको अन्तरले जित हासिल गरेको हो । फागुन २० गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा तिलोत्तमा नगरका १७ वटा वडाका तरुण टिमहरुले भाग लिएको तिलोत्तमा तरुण दल अध्यक्ष खेम क्षत्रीले जानकारी दिए।
प्रतियोगिताको उपाधि विजेतालाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रमाणपत्रसहित पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । विजेताले नगद ३० हजार रुपैयाँ, उपाधि कप, मेडल, प्रमाणपत्र र उपविजेताले नगद १५ हजार रुपैया, कप, मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन् ।
विधागत रुपमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको सम्मान सर्वाधिक गोलकर्ता वडा नं. १ का अतीत रानाले पाएका छन् ।
Posted in प्रमुख समाचार, समाचार
आज बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति ?
८ बैशाख २०७८, बुधबार ११:५० by Samabeshi Khabar
विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्न सक्ने संकेत
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०८:३५ by Samabeshi Khabar
यस्तो रहेको छ आजको मौसम पूर्वानुमान
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०७:११ by Samabeshi Khabar
भारतमा थपिए एकैदिन झन्डै ३ लाख कोरोना संक्रमित
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:५० by Samabeshi Khabar
२०७८/१/८ बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:३८ by Samabeshi Khabar
५ चैत्र २०७७, बिहीबार १२:३३ by Samabeshi Khabar
भोलीबाट ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ सञ्चालनमा आउने
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार २३:१३ by Samabeshi Khabar
पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीका निकै हट तस्विरहरु